Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! राजनीतिक मूल्य सिक्न अष्टलक्ष्मीलाई बुझ्न पर्छ
राजनीतिक मूल्य सिक्न अष्टलक्ष्मीलाई बुझ्न पर्छ
उषाकिरण तिम्सेना बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८
राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेर सत्ता र शक्तिमा थुप्रै पटक पुगेको एकजना ब्यक्ति हुन्-अष्टलक्ष्मी शाक्य । कयौँ पटक झन्डा हल्लाउँदै मन्त्रीको गाडीबाट ओर्लिएर सामान्य भेषभुषामा हिंड्ने, अत्यन्त सरल स्वभाव र शैली, जीवनस्तर अपनाउनु भएको, शक्ति र सत्ताभ्यासको कुनै लेस नदेखिने ब्यक्ति हुन् शाक्य ।
मन्त्रीबाट हटेको भोलिपल्टदेखी सार्वजनिक यातायातमा कयौँ पल्ट मैले भेटेको छु । वहाँको घर, घरको आवरण आदीबाट वहाँको पारदर्शी जीवन सबैले आँकलन गर्न सक्छन् । आज पार्टीको शिर्ष नेतृत्वमा रहेका कमरेडहरु भन्दा कुनै मानेमा कमरेड अष्टलक्ष्मीको योगदान कम छैन । त्यो बेला, भूमिगत राजनीति, भर्खर युवा उमेर प्रबेश गर्दै गरेकी काठमाण्डुको युबतीको कस्तो सपना थियो होला पञ्चायत बिरुद्दको आन्दोलनमा संगठित भएर भुमिगत हुँदाका बखत ? पितृसत्ता, ‘केटी’ माथि यो समाजको ‘पुरुष’ आँखाले हेर्ने नजरबाट कसरी बच्नु भयो होला ?
मलाई थाहा छ, मान्छेमा हुने अनेकौं कमजोरीहरु वहाँमा पनि छन् । तर हाम्रो समाजले गरेको परिवर्तनका सबै आन्दोलनमा के वहाँको योगदान कमरेड केपी ओली, माधब नेपाल र प्रचण्डको जती छैन ? जरुर छ । तर आजको घीनलाग्दो र बिर्सन योग्य राजनीतिभित्रका अराजनीतिक खेलको शिकार किन हुन्छन् अष्टलक्ष्मीहरु ? यहाँ पात्रहरु र प्रबृत्तिको कुरा गर्ने हो भने किन माधब नेपालले अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बन्न सल्लाह दिनु भयो ? पहिला नै अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री नबनाएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत नभएका मान्छेलाई किन मुख्यमन्त्री बनाईयो ? नेकपाभित्रका तमाम राजनीतिक अभ्यास र त्यसपछिका अभ्यासबारे कसैले कसैलाई जवाफ दिनु पर्दैन ?
राजनीतिक शिक्षा कम भएका मान्छेहरु सामाजिक संजालमा अष्टलक्ष्मीको ब्यक्तित्व माथि हिलो छ्याप्दै छन् । राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारीता हुन्छ भन्ने ठूलो प्रमाण कमरेड अष्टलक्ष्मी हुन् । राजनीति मूल्य सहितको हुन्छ भन्ने सिक्न पनि अष्टलक्ष्मीलाई बुझ्न पर्छ । राजनीतिक मूल्य बाहिर गएर सामान्य सम्झौता गरेको भए कमरेड अष्टलक्ष्मी पहिला पनि मुख्यमन्त्री सजिलै हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि सजिलै मुख्यमन्त्री पद जोगिन्थ्यो ।
दलाल मानसिकता बोकेका, राजनीति भनेकै दलाली र गुण्डागर्दी हो भन्ने बुझेकाहरुको राजनीतिमा बाहुल्यता बढ्दो छ । यसकै असर हो, शाक्य सत्ता बहिर्गमन । कमरेडहरु, टिप्पणी र आलोचना गर्न पाईन्छ तर त्यो आरोप र आलोचना तथ्यमा आधारित हुन् वा होईनन् भन्ने कुरा भने ख्याल गरौँ । कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्य तपाईं नेता त हो नै र आमा पनि हो । एउटा मूल्य सहित आजको राजनीतिमा बाँचेकी तपाईं एक गर्व गर्न लायक आमा हौ ।
(लेखक नेकपा एमालेकी नेतृ हुनुहुन्छ)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक ११, २०७८, ११:२३:००